कार्बन मोनोअक्साइड पोईजनिङ -
एक राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित समाचार निस्सासिएर आमाछोरीको मृत्यु । उक्त घटनामा छोरीलाई सेकाउन रातभर कोठामा आगो राख्दा शुक्रबार राती ललितपुरको चापागाउँमा दुई जनाको ज्यान गएको छ । आमा २९ बर्षीया तुलसी घिमिरे र २ महिनाकी छोरीको मृत्यु भएको छ भने पतिको अर्धचेतन अवस्थामा उद्धार भएको देखिन्छ । कोइलाको आगो बाहिर निकाल्न बिर्सदा उक्त घटना भएको हो । सास फेर्न गाह्रो भएपछि मध्यराति एक्कासी उठेका पतिले हतपत्त झ्याल ढोका खोलेका थिए । ढोका खोले लगत्तै श्रमिती र छोरीलाई उठाउने प्रयास गर्दा दुवैले हलचल नगरेपछि उनको तत्काल प्रहरीको सहयोगमा उद्धार गरी दुवैको मृत्यु भइसकेको जनाए र त्यसको कारण कोठामा बालेको आगोको कारण अक्सिजनको कमी भई कार्वनमोनोअक्साइड ग्याँस कोठामा भरिदा मृत्यु भएको बताए । हिउँदका महिनाहरुमा प्रकाशित र अप्रकाशित यस्तै धेरै घटनाहरु, धेरै ठाउँमा हामीले सुनेका छौं भने कतिपयले भोगेको दुखद अवस्था छ । बन्द कोठा मुख्यतया पक्की घरहरुमा तातोको लागि प्रयोग गरिने कोइला आगो तथा अन्य स्रोतको कारणबाट बिस्तारै अक्सीजनको मात्रा घट्न जान्छ भने बिषाक्त ग्याँस कार्वनमोनोअक्साइड बढ्न जान्छ र यसैका कारण मानिसको मृत्यु हुन्छ ।
कार्बन मोनोअक्साइड के हो ?
एउटा यस्तो बिषाक्त रसायनिक ग्यास हो जसमा कार्वन र अक्सिजन मिसिएको हुन्छ । जसलाई सुत्रात्मकरुपमा (co) लेखिन्छ । यो ग्याँस हावाभन्दा ३ गुणा हलुको हुन्छ । यसको मुख्य स्रोतहरुमा दाउराको आगो, गाडीको इन्जीन, ग्यास, तेल, कोइला, पेट्रोल, स्टोभ, आदि हुन्छ ।
पोईजनिङ कसरी सुरु हुन्छ ?
मुख्यतया जाडो महिनाहरुमा हावाको आदानप्रदान कम हुने घर कोठामा यो देखिन्छ । कार्बन मोनोअक्साइडले रगतमा रहेको हेमोग्लोबिनबाट अक्सिजनलाई हटाइदिन्छ, जसको कारण कोषमा हुने आन्तरिक श्वासप्रश्वाश प्रक्रिया बन्द हुन जान्छ भने मुटुमा पनि प्रत्यक्ष खराबी गर्दछ ।
पता लगाउनका लागि केही लक्षण तथा चिन्हहरु
चक्कर लाग्ने, वाकवाक लाग्ने, मन्द टाउको दुख्ने, कमजोरीपन, उल्टी हुने, आँखा धमिलो हुँदै जाने, छिटो छिटो श्वासको गति बढ्ने, मुटुको धड्कन बढ्दै जाने, जीउ काम्न थाल्ने, बेहोस अथवा अर्धचेतन हुने अनि मृत्यु हुने गर्दछ ।
अस्पताल उपचार प्रक्रिया
१०० प्रतिशत अक्सिजन दिन सुरु गर्ने । बिरामीमा देखिने सिजर तथा मुटुको उपचार प्रक्रिया सँगसँगै गर्नुपर्छ ।
घटनास्थल उपचार प्रक्रिया
तत्काल झ्यालढोका खोल्ने । कोइला, दाउरा, स्टोभ आदि तुरुन्त बन्द गर्ने, हटाउने । छिमेकीलाई सहयोगको लागि आव्हान गर्ने । सबै मिली बिरामीलाई तुरुन्त अस्पताल लाने ।
सुत्केरी भएका घरहरुमा तताउनका लागि प्रयोग गरिएका स्टोभ, कोइला, ग्यास पूर्ण रुपमा बन्द गरेर मात्र सुत्ने । कोठामा हावा आदानप्रदानको लागि झ्याल आंशिक भए पनि खुल्ला राख्ने । एउटा कोठामा भिडभाड गरेर धेरै मानिस नबस्ने ।
अमूल्य जीवनलाई कार्बन मानोअक्साइडको शिकार बनाउन या बन्नु पूर्व नै सावधानी तथा सर्तकता लिँदै जीवन सुखमय बनाउनुहोस् ।